यसकारण आईफोनको 'डाटा केबल' हुनसक्छ खतरनाक !
के तपाई आईफोन प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ ? आईफोनको डाटा केबल किन्दै हुनुहुन्छ ? सावधान रहनु होला!
एक रिपोर्टका अनुसार आईफोनको केबल चार्जरमा विभिन्न प्रकारका पैलोड्स ( भाइरसयुक्त मेसेज), स्क्रिप्ट र कमान्ड्सहरू पनि डिफल्ट इन ब्युल्ट ( केबलमै जडित) भएको हुन्छ। जसको कारण ह्याकरहरूले डिभाइस (आईफोन) चार्जमा रहेको अवस्थामा अन्य डिभाइस वा वाइफाई रेन्जको मार्फतबाट प्रयोगकर्ताको डिभाइसमा मिलिसियस पेलोड्स ( हानीकारक मेसेज) वा भाइरसयुक्त सफ्टवेयर आइफोनमा पठाउन सक्छन्।
ह्याकरले आइफोन स्वयंमले आफ्नो नियन्त्रणमा पनि राख्न सक्छ। प्रयोगकर्ताको आईफोनमा केबल जडान भएसँगै ह्याकरले आइफोन लक गर्न सक्छन् जसको कारण प्रयोगकर्ताले पुनः पासवर्ड लगाउनुपर्ने हुन्छ। यतिसमयसम्म ह्याकरले सबै प्रकारको डाटा डिटेलमा लिइसकेको हुन्छ। यसले प्रयोगतकर्ताको निजी तथा गोप्यतामाथि सुरक्षा चुनौती थपेको छ।
ह्याकर एमजीका अनुसार आइफोनको केबल चार्जरमा एक विशेष प्रकारको लाइटनिङ्ग युएसबी केबल प्लेटफार्म हुन्छ जसको कारणबाट ह्याकरले डाटा सजिलै तान्न सक्छ। ह्याकर एमजीका अनुसार, वर्तमानस्थितिमा कुनै प्रकारको फ्ल्यास ड्राइभ प्रयोग गर्नु नै सुरक्षित छैन। आइफोनको केबल चार्जर पनि यी फ्ल्यास ड्राइभ टेकनिकमा आधारित रहेको छ। जसको कारणबाट डाटा सुरक्षामा खतरा रहेको छ।
ह्याकर एमजीले दैनिक भास्करमा बताए अनुसार, केबलको डिजाइन यस प्रकारको हुनुपर्छ जसमा सेक्युरिटी टुलको प्रयोग भएको होस्।